Biostratigraphy: ihe ọ bụ, ihe ọ na-amụ na etu o si dị mkpa | Network Meteorology
N'ime geology enwere alaka ana akpo stratigraphy Ihe ọ na-eme bụ ịmụ superposition nke strata ma nye nkume ahụ afọ. N'ime alaka a, enwere ngalaba ọzọ pụrụ iche akpọrọ biostratigraphy. Ndị ọkà mmụta ihe banyere ala enwewo ike ịtọ ntọala afọ nke sedimentary nkume n'ihi ụkpụrụ stratigraphic na ụkpụrụ nke ịdị n'otu. Agbanyeghị, iji nwee ike wuo kọlụm stratigraphic zuru ụwa ọnụ, achọrọ ngwa ọrụ ọzọ nke na-enye anyị ohere ịmebe afọ nke akụkụ dị iche iche nke akụkụ ụwa ma jikọta ha na ibe. Nke a bụ ọrụ nke biostratigraphy.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ngalaba sayensị a.
1 Kedu ihe ọmụmụ biostratigraphy
2 Biohorizons na biozones
3 Mkpa nke geological oge biostratigraphy
Kedu ihe ọmụmụ biostratigraphy
A mụrụ ngalaba sayensị a iji dozie nsogbu ụfọdụ azulitere mgbe ha guzobere afọ nke nkume na kọlụm stratigraphic zuru ụwa ọnụ dum. Ndị ọkà mmụta ihe banyere ala oge ochie tụpụtara ụkpụrụ nke inwe ọdịniihu n'usoro stratigraphic. Principlekpụrụ a nke inwe obi ọma na-agwa anyị nke ahụ lithological unit ga-ewetara a usoro nke fosilil njirimara nke afọ ndụ ha. Emeghi ka o gosiputa ihe ndia na mpaghara a ma aghaghi imeghachi ya na ozo. Ihe kachasị dị iche iche na-egosi na ụdị nkume dị iche iche dị iche iche.
Fossils kasị anọchite anya ndị kachasị mma bụ ndị na-eje ozi ijide afọ nke nkume ndị ahụ. A na-akpọ fosili ndị a kachasị mkpa. Ejiri aha ndi ndu ha mara ha. A na-egosipụtanụ ihe ndị a dị ka ụzọ si gbasaa mbara ala niile. Ha na-adịkarịkarị ma na-echekwa nke ọma. Na mgbakwunye, ụdị niile ga-apụta n'oge dị mkpirikpi. Otú ọ dị, ụdị ahụ nwekwara ike iwepụta onwe ya ogologo oge.
Ekwesiri iburu n'uche na, ka anyi nwee oge omumu omumu a, anyi aghaghi geological oge. Oge a bu ala ala anyi bu nke gosiputara oge nke umu mmadu putara ma gbasaa ihe dika otu oge. N’akụkọ ihe mere eme nile na oge ala nke mere na ụwa anyị, e nwere ndị nke oke mbibi mere n’ụwa niile.
Anyi aghaghi iche ihe omuma nke akwukwo ndekota na-enye anyi, facies fossils ndị bụ ndị na-egosi jikọtara ya na otu nkume. Okpukpo ala ndi a adighi agbanwe agbanwe ruo ogologo oge.
Biohorizons na biozones
Ha bụ echiche abụọ dị na ngalaba sayensị akpọrọ biostratigraphy. Nke a pụtara na fosilil ọ bụla pụtara n’otu ụdị strata. Onweghi nke no na okwute nke di n’ime ime ma n’elu akụkụ nke ogidi stratigraphic gha aghaghi ibu ihe ozo nke umu a. Igwe lithological bụ ndị na-amachi ọnụnọ nke fosil ma kpọọ ya biohorizons. Dị ka aha ya na-egosi, ọ na-egosi mpaghara ebe fosil ahụ dị n’adabereghị na nke ndị ọzọ.
E nwere ụdị biohorizons abụọ. N’aka nke ọzọ enwere ndị nke izizi na, n’aka nke ọzọ, e nwere ndị nke ikpe-azụ ha. Nọmalị otu ụdị na-agbanwe agbanwe na obere ihe na-efu efu. Esemokwu dị iche iche nke ụdị a na-enwekarị usoro mgbanwe. Ọ bụrụ n ’inyocha site na mbara igwe, ị ga - ahụ na ha adịghị ọcha. Agbanyeghị, n'oge ụfọdụ, ha bụ mkpochapu nke mkpochapụ, dịka anyị kwuburu na mbụ, nke na-eme ka a kpochapụ ọtụtụ ìgwè nke anụmanụ na osisi na obere oge. Otu ihe atụ nke a bụ oke mkpochapụ nke dinosaurs nke na-egosi njedebe nke oge Cretaceous.
Biohorizons bụ akara akara mkpochapụ ma dokwuo anya. N'aka nke ọzọ, anyị nwere biozones. Ihe ndị a bụ mkpụrụedemede lithological na-ewetara fosil ma ọ bụ ọdịnaya dị omimi nke dị nnukwu mkpa. Anyị nwere ụfọdụ ụdị biozones:
Na biozones dum bụ ndị na-anọchite anya njikọ nke ọtụtụ okike na ndammana n'ime ngalaba stratigraphic.
Biozones nke nrụgide bụ ndị kwekọrọ na biozones nke na-agbasawanye ma ọ bụ na ntanetị. Ha akara ọdịiche dị n'etiti strata.
Na apogee biozones ha bụ ndị na-egosi oke ụba nke ụdị, ụdị na ọbụna ezinụlọ. Ndị a bụ ọkachamara karị.
Oge etiti biozones Ha bụ ndị na-anọchite anya nkume dị n’etiti biohorizons abụọ nke okike dị iche iche.
Mkpa nke geological oge biostratigraphy
Oge a na-amụ banyere ọdịdị ala ugbu a dị n'ọmụmụ stratigraphic niile. Biostratigraphy bụ ngwa ọrụ kachasị mma nke nyeere anyị aka ịgwọ afọ nke nkume n'ụzọ ụfọdụ. A na-agwọ nkume niile dị n'akụkụ ụwa niile na, na mgbakwunye, ọ nyere aka wulite mpaghara stratigraphic ụwa. Ihe data niile metụtara ma ekwughi ihe ọ bụla gbasara afọ ụwa. Yabụ, ndị sayensị ga-agba mbọ gbakọọ afọ a site na iji biostratigraphy.
Enwere ọtụtụ nnwale na ndị sayensị enyela echiche dịgasị iche iji nwee ike gbakọọ afọ ụwa anyị. Nnwale ndị a kpatara ọtụtụ esemokwu na arụmụka, dị ka ụfọdụ ndị na-ekwu na mbara ala waswa dị naanị afọ 75.000. Emechara dozie okwu a site na nyocha radieshon na nnwale mmiri igwu mmiri. N’ụzọ dị otu a, a mụọla ọdịnaya nke ihe ndị na-eme redio na nkewa na ihe ndị ọzọ. Nke a ekwe omume site na ịgbakọ afọ zuru oke nke ugwu mgbawa site na stratigraphy.
A na-agbakwunye afọ a gbakọrọ na ogo ogo na usoro geologic nke anyị maara taa ka e kere. Ihe ọ̀tụ̀tụ̀ a bụ nke na-egosi ihe ọmụma banyere mbara ụwa anyị a ihe dị ka ijeri afọ 4.600 gara aga na ọdịdị nke nkume mbụ ndị echekwara maka ihe dịka ijeri afọ 3.600.
Dịka ị pụrụ ịhụ, okike ndị a bụ ezigbo ngwa ọrụ iji mụta banyere akụkọ ntolite nke ụwa anyị. Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere nnukwu ịba uru nke biostratigraphy.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Biostratigraphy